Fantaro Ireo Mafana Fo Mpiaro Ny Zon’ireo Vehivavy Nofonjaina Tany Arabia Saodita? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2018 16:37 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, Français, English, Nederlands, русский, Deutsch, বাংলা, English
“Afaho ireo mahery fo” Ireo Saodiana mahery fo mpiaro ny zon'ireo vehivavy: Aziza al-Youssef, Eman Al-Nafjan ary Loujaïn al-Hathloul. Sary an'ny fanentanan'ny Amnesty International.
Ny famonoana an'i Jamal Khashogg, ilay Saodiana mpanao gazety, tamin'ny oktobra 2018 — izay nolazain'ireo tomponandraikitra Tiorka sy Amerikàna fa maty novonoina noho ny baikon'ny Printsy mpandova Mohamed Bin Salman — dia nitondra hazavana vaovao indray mikasika an'ireo fanitsakitsahana zon'olombelona marobe ao amin'ilay fanjakana.
Ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona sy ireo mahery fo iraisam-pirenena ary ao amin'ny faritra dia manararaotra an'io fitsirihana io indray ho fotoana hitakiana ny famoahana an'ireo mahery mpiaro zon'olombelona nofonjaina, anisan'izany ireo mpiaro zon'ireo vehivavy.
Fara-fahakeliny, folo ireo mahery fo mpiaro ny zon'ireo vehivavy no nofonjaina ao Arabia Saodita amin'izao fotoana izao, ho valifaty tamin'ireo hetsika nataon'izy ireo mifandraika amin'ny zon'olombelona. Anisan'izy ireo i Aziza al-Youssef, Eman Al-Nafja ary Loujaïn al-Hathloul. Hatramin'ny tapaky ny volana May no nogadraina ireo mahery fo telo ireo, rehefa avy nosamborin'ireo Saodiana tomponandraikitra ary natokany monina tany amin'ny toerana tsy fantatra. Nanao fanentanana avokoa ireo vehivavy rehetra ireo mba hananana zo hamily fiara ny vehivavy ary hanohitra ny rafitra saodiana ‘fiahian'ny lehilahy’ efa lany andro, izay mametraka ny vehivavy ho tsy maintsy maka faneken'ny lehilahy mpiambina azy raha te-hanambady, hampanofa ny tranony ihany, hangataka fahazoandalana na hitsidika any ivelan'ny firenena.
Fanampin'ireo lohahevitra mahasarotiny faratampony ireo, samy nampiasa ny aterineto avokoa ny tsirairay ho an'ireo karazana fikatrohana tsy miankina. Nanolo-tena hisolovava an'ireo sisa velona tamin'ireo herisetra an-tokantrano i Aziza al-Youssef. I Al Nafjan no mpanoratra ny blaogy Saudiwoman, izay nanoratany mikasika ireo zon'ny vehivavy, ireo olana ara-tsosialy ary ny fahatakarana ara-kolontsaina ao anatin'ny fanjakana.
Tamin'ny taona 2014, nankahatra ny fandraràna ny vehivavy tsy hamily fiarakodia i Loujain al-Hathloul tamin'ny fitondrany ny fiarany avy any Emirà Arabo Mitambatra nankao Arabia Saodita. Nandalo fitsaràna Ady heloka bevava manokana izy (SCC), fitsarana mahefa ho an'ireo raharaha fampihorohoroana sy ny fiarovam-pirenena. Folo herinandro taorian'ny fitazonana azy, navotsotra izy ny 12 febroary. Manjavozavo ny momba azy ara-pitsaràna, araka ny voalazan'ny Amnesty International [en].
Al-Fassi eo amin'ny familiana. Sary eo amin'ny kaonty Twitter -n'ilay mpikatroka mahery fo.
Mahery fo iray hafa voafonja ankehitriny, i Hatoon al-Fassi, nosamborina tamin'ny 27 jona, telo andro taorian'ny nanesorana ny fandraràna ireo vehivavy tsy hamily fiarakodia. Araka ny voalazan'ny Gulf Center for Human Rights (GCHR, Ivon-toerana ho an'ny zon'olombelona ao Golfa):
Mpampianatra malaza i [Mme] Al-Fassi, profesora mpikambana amin'ny tantara mikasika ny vehivavy ao amin'ny anjerimanontolon'ny Mpanjaka Saoud, ary mpanoratra ny Les femmes dans l'Arabie pré-islamique : Nabatéa. Nanolo-tena izy hatramin'ny elabe hiady ho an'ny zon'ireo vehivavy mba handray anjara amin'ireo fifidianana monisipaly sy ny ho afaka mamily fiarakodia, ary izy no vehivavy iray voalohany indrindra afaka nitondra fiarakodia, tamin'ireo vehivavy hafa rehetra, tamin'ny andro izay nanatsoahana ilay fandraràna ny vehivavy tsy hamily fiarakodia.
Taorian'ny fisamborana an-dRtoa al-Youssef, al-Nafjan sy al-Hathloul tamin'ny volana may, sy ireo mahery fo telo hafa, nandehandeha teo amin'ireo mediam-panjakana ireo fanambaràna ofisialy, niampangana an'ireo vehivavy telo ho manohintohina ny fiarovam-pirenena tamin'ny alalan'ireo fifandraisany aminà andrim-panjakana vahiny “mikatsaka ny hanozongozona ny filaminana sy ny fifamatoran sosialin'ny firenena”, hoy ny tatitra nataon‘ny Amnesty. Tokony hiatrika ilay Fitsaràna heloka bevava manokana ihany koa izy ireo.
Sary momba ny fanentanana hahafahan'ireo vehivavy hamily fiarakodia, an'i Carlos Latuff. Sehatra ho an'ny daholobe.
Ny 30 jolay, mahery fo roa hafa no nosamborina, dia i Samar Badawi sy Nassima al-Sadah. Samar Badawi dia anabavin'i Raif Badawi, blaogera iray nahiboka an-tranomaizina rehefa voaheloka hifonja mandritra ny 10 taona ary nahazo vely karavasy in-1.000 noho ny nananganany vohikala iray hahafahan'ny daholobe mifanakalo hevitra, tamin'ny taona 2014. Mahery fo tsy mety reraka miaro ny zon'ireo vehivavy sy ny rariny ara-tsosialy, im-betsaka no nosamborina sy nanaovan'ireo tomponandraikitra Saodiana fanadihadiana i Samar Badawi.
Tamin'ny febroary 2017, naka am-bavany azy nandritra ny ora fito no ny Birao misahana ny fanadihadiana sy fanenjehana am-bavany, mikasika ireo asany fiarovana ny zon'olombelona sy ilay fanentanana mba hampitsaharana ao anatin'ny fanjakana ny fiahian'ny lehilahy manavakavaka .
Mpikambana mpamorona ny Ivon-toerana Al-Adalah Rtoa Al-Sadah, ho an'ny zon'olombelona, fikambanana iray izay nosakan'ny governemanta ny fahazoandalana hiasany. Tahaka an'i Samar Badawi, nanao fanentanana ihany koa i Nassima Al-Sadah mikasika ny zon'ireo vehivavy ary efa talohan'izao izy no nalaina am-bavany mikasika ny maha-mpikatroka azy ho an'ireo zon'olombelona. Nandritra ireo fifidianana monisipaly tamin'ny taona 2015, izay sambany nahafahan'ireo vehivavy nandatsa-bato sy nahafahan'izy ireo nirotsaka ho fidiana, naniry hirotsaka Rtoa Al-Sadah. Roa herinandro mialoha ny fifidianana, tsy nahilika tsy nasiam-panazavana ny firotsahany.
Araka ireo loharanom-baovao sasantsasany, ratsy ny fitondrana an'ireo vehivavy Saodiana mahery fo voafonja eo ampelatanan'ireo mpanadihady azy. Araka ny voalazan'ny Human Rights Watch, fara-fahakeliny telo amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona voafonja no nampijaliana ary niharan'ny ‘fampiasàna herinaratra, ireo vely karavasy eny amin'ny fitombenana, ary hatraminà famihinana sy oroka an-terisetra’.
Tamin”ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ireo vehivavy mpiaro ny zon'ny vehivavy, nankalazaina ny 29 novambra, manohy manao antso ho fanafahana an'ireo Saodiana mahery fo ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona, amin'ny alalan'ireo fanentanana amin'ny tambajotra, fanangonan-tsonia miisa 240.000 ho an'ny ONU napetraky ny Women's March Global, ary ireo taratasy sy fanambaràna fanohanana tsy hita isa.
19 ora izayTiorkia